အရိုးရွေးချယ်ဖို့အခြားသူများကိုရိုးရှင်းစွာလည်းနုပျိုစဉ်အခါ, သွေ့ခြောက်သောအရိုးနှင့်အတူရှုပ်ထွေးလိုပါဘူးသူကား, လူတိုင်းငါးတစ်ဦးလိုအပ်သောရှိသည်သိတယ်, ဒါပေမယ့်ကလေးအားလုံးကမချစ်ရိုးရှင်းစွာလှော်သို့မဟုတ်စွပ်ပြုတ်သည်။ ငါး၏စားသုံးမှုရိုးရှင်းကကူညီပေမယ့်လည်းဒီခြောက်သွေ့ပိန်ငါးနှင့်အတူဘာလုပ်ရမှန်း၏မေးခွန်းကိုနှင့်အတူမကယ်မသာဖြစ်သောငါးကိတ်မုန်၏အကူအညီ။
အိမ်မှာအရသာ fishcakes ပိုက်မှာချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ပိုက်လွှာ - 1 ကီလိုဂရမ်;
သန့်စင်ပြီးသံလွင်ဆီ - 80 ဂရမ်,
အဖြူချပ်၏မုန့် - 8 ချပ်;
နို့ - 210 ဂရမ်;
မုန့်ညက် - 55 ဂရမ်,
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ - 40 ဂရမ်,
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးနို့အဖြူရောင်မုန့်ထဲမှာစိမ်, ဒါပေမယ့်အလွန်ဆိုးရွားပျော့ပြောင်း, မုန့်ကိုအထူးသဖြင့်နိမ့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ကြောင့်, ဖုတ်အပေါ်ယံလွှာကိုဖြတ်ဖို့မေ့လျော့ကြပါဘူး။ စုစုပေါင်းခုနှစ်, သငျသညျစိမ်၏ 300 ခန့်ဂရမ်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်နို့ပေါင်မုန့်ပေါ်ဖိ။ ဒါဟာငါးကိတ်မုန့်တစ်ခုစံပြအချိုးဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျက stuffing အတွက်ထားပါလိမ့်မည်ကျင့်ကိုကျင့်လျှင်ဘောဇဉ် grinder အပိုင်းပိုင်း, ကြက်သွန်နီနှင့်သန့်ရှင်းလွန်းကြမ်းခုတ်ခြင်းနှင့်ကြက်သွန်ဖြူထဲမှာကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်ရန်လွယ်ကူသို့ဖြတ်တန်း, သငျသညျစပါးကိုကြိတ်လို့မရပါဘူး။ စိမ်မုန့်သည်ကောင်းပေမယ့်အခြောက်အကညှစ်နှငျ့ငါးကိုပြန်ဖွင့ပါဘူး။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်ထုတ်ကုန်မီးဖိုချောင်ကရိယာသုံးပြီးကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်။ ရလဒ် mince အတွက်ဆားနဲ့နှစ်ခုကြက်ဥထည့်ပါ။ ဒါဟာထုတ်ကုန်၏ဆီဥကိုအကြောင်းအရာတိုးမြှင့သံလွင်ရေနံ add, ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့, သငျသညျဝက်သားအဆီထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ကောင်းသောနိုင်ပါတယ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပေမယ့်သားသမီးတို့အဘို့, ကအကောင်းဆုံးသံလွင်ဆီဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးနောက်သင်ကကောင်းစွာနှိုးဆော်ထားရပါမည်, ပင်တစ်နည်းနည်းကိုသင်သူ့ကိုနှောင့်ယှက်သည့်အတွက်ဖန်ထည်နံရံများ၏ stuffing ရိုက်နှက်ရန်။ အခုတော့ကိုဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်နာရီစုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာစွန့်ခွာ။ ဒါကအအေးပု Patti ဒယ်အိုးကျော်ပြန့်နှံ့မည်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေကို minimize လုပ်, stuffing ပိုပြီး viscous နှင့်စေးကပ်ဖြစ်လာသည်။ ရှိသမျှသည်အခြားသောကဏ္ဍအဖြစ်ကတခြား cutlets အတူသူတို့ကိုတူညီတဲ့အရွယ်အစားစေရန်, ရှိသမျှတပြိုင်နက်ပိုကောင်း configure, ပြီးတော့, အစားထိုးမုန့်ညက်အတွက် paniruya ပူရေနံတစ်ဒယ်အိုးထဲမှာချက်ပြုတ်။
မီးဖို၌ Pollock ၏ငါးကိတ်မုန့်ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Pollock တန်း - 0.7 ကီလိုဂရမ်;
ဆော်လမွန်ငါးတန်း - 100 ဂရမ်;
oatmeal - အပိုဒ်5။ ဇွန်း,
ကြက်သွန်နီ - 1 ကြက်သွန်;
သံလွင်ဆီ , စစ် - '35
alaska Pollock ထုရုံကြိတ်များ၏အဆင်ပြေဘို့, ခုတ်မဟုတ်ပါဘူး။ စာလမုန်သည်လည်းရုံပင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့အရသာပေးသည်အနီရောင်တစ်ဦး Pre-ဖြတ်, ငါတို့အဆီခုတ်တိုးမြှင့်ဖို့ရိုးရှင်းစွာထားဖို့လိုရှိသမျှသောငါး, သငျသညျမဆိုအခြားအဆီပြန်ငါးကိုသုံးနိုင်သည်ကိုပွငျဆငျ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များလွန်း, သဘာဝကျကျအဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့် Pre-ရှင်းလင်းပြီးနောက်ပိုင်းဖြတ်တော်မူ၏။ ယခုမှာမီးဖိုချောင်ကရိယာ၏အကူအညီနှင့်အတူ stuffing အားလုံးကိုပြင်ဆင်ထားအစားအစာများကိုပြန်သုံး။ အဲဒီနောကျ, သူ့ဆားနဲ့အထဲတွင် oat အလွှာဖြန်း, သူတို့က, အဘာဂါ၌သင်တို့၏မုန့်ကိုအစားထိုး razbuhnuv နှင့်လျှပ်ပေးခြင်း, ဒါပေမယ့်လည်းကြက်ဥအဖြစ်ငါးကိတ်မုန့်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောမဖြစ်မနေပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ကော်ဂုဏ်သတ္တိများအားဖြင့်သင်တို့ကိုအစားထိုးပါလိမ့်မယ်မသာ။ ကြိုတင်မဲအတွက် 180 ဒီဂရီမီးဖိုလှည့်။ ကောင်းပြီရောထွေး minced အသားများနှင့်ကရေခဲသေတ္တာထဲမှာနာရီဝက်အဘို့ငြိမ်ဝပ်စွာနေပါစေနှင့်အစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူတကိုယ်လုံးရောင်သည်အထိ oatmeal ။ ဒါဟာမိနစ် 20 အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန် greased မုန့်ဖုတ်စာရွက်နှင့်နေရာပေါ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ Patti lay မှသာဖြစ်နေဆဲပင်။
minced ဆော်လမွန်ငါး - 0.5 ကီလိုဂရမ်;
ကြက်သွန်နီ - 1 ½ PCs; ။
White ကပေါင်မုန့် -4ချပ်,
နို့ - 150 ဂရမ်;
အဖြူရောင်မုန့်အစအန၏ချပ်ကနေအပေါ်ယံလွှာ Cut နှင့်နို့နှင့်အတူဖြည့်ပါ။ မုန့်နို့ကိုစုပ်ယူပါလိမ့်မယ်နေစဉ်, စင်ကြယ်သောနှင့် Blender သို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများလေးကိုခုတ်။ ကြက်သွန်နီတစ်စင်ကြယ်သောအရသူတို့ကိုနို့ပေါင်မုန့်ညှစ် add, ကြက်ဥ, ဆားကိုထည့်သွင်းဖို့မမေ့မလြော့ပါဖို့ minced ငါးမွှေပေးပါ။ အခုတော့ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုကောင်းစွာသည်နှင့်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်မိနစ်အနည်းငယ်အဘို့အ kneaded ။ ချက်ပြုတ်သောအခါဆော်လမွန်ကိုယ်တိုင်ကဆနျ့ကငျြဘဥပမာ, ပိုက်သို့မဟုတ် Pollock အတွက်အတော်လေးရဲရင့်ဖြစ်သကဲ့သို့, ဤငါး၏ cutlets, ဆူဖြိုးသောအကြောင်းအရာများကိုတိုးမြှင့်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ကအနည်းဆုံးနှစ်နာရီဘို့ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ minced cutlets ချက်ပြုတ်ဖို့အဆင်သင့်။ အခုတော့အနည်းငယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီနှင့်ဒယ်အိုးထဲမှာ breadcrumbs နှင့်ကြော်မှာသူတို့ကိုချိုး, Patti ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပေသည်။
Birch ဘူးသီး - ရိုးရာကုသ
အမျိုးမျိုးသောရောဂါများကုသမှုများအတွက်အိမ်သူအိမ်သားများထံမှ 16 အမှုအရာ
လီလီ Rabe ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့မိခင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်
Vanessa Paradis သူမ၏ချစ်သူတို့ရှမွေလသည် Benshetri လက်ထပ်
စကတ် 2013 နှင့်အတူအမျိုးသမီးများနေ့ဝတ်စုံ
Qasr အယ်လ် Muvaydzhi
ဇူလိုင်လ 12 ရက်နေ့ကစိန့်ပေတရု၏နေ့တွင်အရိပ်လက္ခဏာ
နို့ဆီနှင့်အတူရေနံမုန့် - impregnation နှင့်အလှပြင်ဆင်ရေးအချိုပွဲအတွက်အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
မီးဖို၌ပန်းသီးနှင့်လိမ္မော်သီးနှင့်အတူ duck - အရသာဟင်းလျာများ၏အားလပ်ရက်ချက်ပြုတ်နည်းများ
ခေါင်းအုံး Butterfly - ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူမာစတာအတန်းအစား
Psychoanalysis - ကဘာလဲ, အခြေခံများနှင့်နည်းပညာများကို
Rosemary - အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများ
ပိုးမွှားများနှင့်ရောဂါများမှဆောင်းဦးရာသီ Raspberry ထုတ်ယူခြင်း
ဆောင်းဦးရာသီ 2017 ၏ဖက်ရှင်ပုံရိပ်များ - ဤရာသီဝတ်ဆင်ရန်ဘာလဲ?
Honeysuckle - တစ်ဦးချင်းစီနေ့အဘို့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများနှင့်အစားအစာများများအတွက်ချက်ပြုတ်နည်းများ